मेस्सी बार्सिलोनामै बसेको हेर्ने रामोसको इच्छा | Hamro Khelkud
मेस्सी बार्सिलोनामै बसेको हेर्ने रामोसको इच्छा
एजेन्सी – रियल म्याड्रिड तथा स्पेनिस राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सर्जियो रामोसले यूईएफए नेसन्स लिग अन्तर्गत जर्मनीविरुद्ध खेलअघि पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ दिए । उनले मेस्सीदेखि राष्ट्रिय टोलीको तयारीसम्म आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
लुइस एन्रिकेसँग फेरी काम गर्दा कस्तो महसुस भएको छ ?
उनी उत्कृष्ट प्रशिक्षक हुन् । उनलाई फिर्ता पाउनु हाम्रो लागि राम्रो हो । हामीबाट सक्दो राम्रो प्रदर्शन निकाल्न उनले भरपुर प्रयास गर्नेछन् । उनको परिवारमा निकै दुखद घटना घट्यो, त्यसका बाबजुद उनलाई फ्र्ता पाउँदा हामी खुसी छौं ।
लिओनेल मेस्सीको अवस्थाबारे के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यसबारे मैले धेरै ध्यान दिएको छैन । तर मेरो विचारमा मेस्सीलाई आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार छ । यसो भनिरहँदा स्पेनिस फुटबल, बार्सिलोना र हामी सबैको लागि पनि उनी बसेको हेर्न चाहन्छु । हामी उत्कृष्ट खेलाडीको वरपर नै खेलिरहन चाहन्छौं ।
रियल म्याड्रिडसँग सम्झौता नवीकरणबारे केहि कुरा अघि बढेको छ ?
हामीले यसबारे निर्णय लिन बाँकी छ । तर अहिलेको अवस्थामा म र क्लब दुवै पक्ष यसबारे धेरै सोचिरहेका छैनौं । मैले यहाँ धेरै वर्षदेखि खेल्दै आएको छु र छोड्ने भन्ने सोच बनाएको छैन । मलाई विश्वास छ क्लबसँग राम्रो सहमति छिट्टै हुनेछ । अहिलेलाई मेरो ध्यान अर्को सिजन कसरि राम्रो गर्ने भन्नेमा छ ।
ओलम्पिकमा सहभागी हुने विषयमा सोच्नुभएको छ ?
अहिले म आउने खेलको विषयमा मात्र सोच्दैछु । ओलम्पिकको विषयमा अहिले नै केहि बोल्न सक्दिन । आउने सिजन समय अभावका कारण पनि निकै कठिन हुनेछ । हामीले ३ दिनको अन्तरमा लगातार खेल्नुपर्ने अवस्था छ ।
लगातार खेल भएकाले कुनै खेलमा विश्राम लिने सोच्नुभएको छ ?
जब स्पेन खेल्छ, मैले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँछु । म हरेक खेल खेल्दै आफ्नो योगदान दिन तत्पर छु । कहिले कहीं टोलीमा खेलाडी परिवर्तन गर्दै अन्यलाई अवसर दिने पनि अवस्था आउला । तर म स्पेनले बोलाउँदा हरेक पटक खुसीसाथ उपलब्ध हुनेछु ।